SocialBee: Iyo Diki Bhizinesi Social Media Platform ine Concierge Services | Martech Zone
Kwemakore, ndakashandisa uye ndakabatanidza akawanda ema social media mapuratifomu evatengi. Ndichiri nehukama hukuru nevakawanda uye munoramba muchindiona ndichisimudzira mapuratifomu matsva uye aripo. Izvi zvinogona kuvhiringa vaverengi… vachishamisika kuti sei ndisingangokurudzira uye kusunda chikuva chemunhu wese. Handidaro nekuti zvese zvinodiwa nekambani imwe neimwe zvinosiyana kubva kune imwe.
Kune akawanda emasocial media mapuratifomu anogona kubatsira mabhizinesi… asi zvinangwa zvako, nzira, vateereri, makwikwi, maitiro, tarenda, bhajeti, nguva, mamwe mapuratifomu mune yako stack ... ese anoita basa rakakura muvatengesi raunogona kuwana kudzoka pakudyara kubva. Ndicho chikonzero chinangwa chiri mumutsara we Martech Zone ndiko kutsvagisa, kudzidza, nekuwana. Ini handikwanise kurodha maodha mhinduro kunze uko kusvika ndanzwisisa bhizinesi rako. Kodzero mhinduro nokuti bhizinesi rako rinogona kunge rakapesana nezvandingakurudzira kune rimwe.
SocialBee: ZveSolopreneurs, Mabhizinesi Madiki, uye maAgency Anovashandira
YemagariroBee inzvimbo yesocial media manejimendi inotarisana nekugadzira zvemukati uye kugovana kuburikidza nemagariro chiteshi. Iyo kambani yakasarudzika mukuti chikuva chinouya nekudzidziswa uye sarudzo concierge masevhisi ekubatsira solopreneurs, mabhizinesi madiki, uye masangano anovashandira. Kwete iwe chete iwe unowana chikuva, asi iwe unogona zvakare kuwedzera-vakazvitsaurira nyanzvi kuti vakubatsire kunze nekugadzira zvemukati, kushambadza, kukura kwenharaunda, nezvimwe.
Iyo yemukati yekugovera inotarisa mukati YemagariroBee yakanyatsosiyana, zvinhu zvinosanganisira:
Social Media Content Categories - zvikamu zvinokubatsira kuronga mameseji kuitira kuti uwane musanganiswa uri nani wezvinyorwa uye zvinokupa iwe kudzora kurinani kwekuronga, kugadzirisa kune yega yega network, kugadzira misiyano, kuwanda kugadzirisa, uye kudzokorora mutsara. Unogona kumbomira kana kumhanya chaiwo mapoka.
Social Media Kuburitsa - dhizaini uye tarisisa ako enhau enhau mamesheni ane akachengetwa hashtag neprofile kana chikuva. Iyo chikuva inotsigirawo emojis kumira kunze. Iwe unogona kuunza zvinyorwa kuburikidza CSV, RSS, wow, kana homwe.
Yemagariro Midhiya Kubatanidzwa - Shamba paFacebook profiles, mapeji, uye mapoka. Shamba pa Twitter. Shamba pane yako LinkedIn profiles uye mapeji ekambani yako. Tumira mifananidzo, carousels, kana mavhidhiyo pa Instagram. Tumira paGoogle Bhizinesi Rangu.
Zvemagariro Media Kuronga -Tarisa karenda yako, kutumira panguva dzakatarwa, kupera basa kunodiwa pane yakatarwa zuva kana mushure mehuwandu hwekugovana. Rongedza wega zvichienderana neprofile yega yega.
Email Notifications - ziviswa kana maposita atadza, kana kutakura kunze kwapera, kana mutsara wechikamu chako usina chinhu.
Analytics - sanganisa kupfupisa URL (Rebrandly, Bitly, RocketLink, JotURL, Replug, PixelMe, BL.INK) uye chikamu-chakavakirwa Zvirongwa zveUTM kuti utarise kuita kwako zvemukati.
Bhuku A SocialBee Demo
Heino mhedziso yevhidhiyo yepuratifomu:
Kunyangwe iwe uri kutonga yako zvemagariro vezvenhau zano kana mazano evatengi vako, YemagariroBee inopa huwandu hwemwedzi wega wega social media service package, kusanganisira:
Social Content Kugadzira -Social media chikamu chakakosha chekushambadzira kwako, kunyanya kana uri kutsvaga kutariswa uye kuvaka ruzivo. Nhanho yekutanga pakuvaka huvepo hwakasimba pasocial media kugovera zvemhando yepamusoro uye zvinotaridzika zvinokwezva nguva nenguva.
Content Marketing -Kugadzira zvemukati kunoita kuti iwe uvake hukama uye kugadzira kuvimbika uye kuvimba nevatengi vako vazvino uye tarisiro. Zvakare, zvakaitwa zvakanaka zvemukati zvinogadzira traffic kune yako webhusaiti uye inova chinhu chakakosha mukutungamira chizvarwa chako.
Engaged Kukura -Kusimudzira hukama hwe1-on-1 kuvaka nharaunda yakatenderedza bhizinesi rako kunobhadhara! Nharaunda haingori sosi huru yemhinduro asiwo kana yakavakwa zvakanaka, unogona kushandura vateereri vako kuva vatengi vanobhadhara uye gare gare kune vamiriri vakavimbika.
Kuwana uye Kuwedzera -Kuedza kwekushambadzira kwesocial media hakungokwidziri kusvika kwako uye kugonesa iwe kugovera meseji yako mumatanho akati wandei, asi zvakare inokodzera chero bhajeti uye zviri nyore kuyera. Uyezve, iwe unowana mukana kune chaiyo yekunongedza maitiro.
Uye, kana iwe uchingoda rubatsiro rwekutanga, SocialBee inopa flat-mubhadharo package kuti uendese zvirimo zvako kuenda. YemagariroBee kana kuti uri kutsvaga kutanga patsva, tinogona kukubatsira nekutanga kuseta. Kubva pakuendesa zvese zvirimo uye zvigadziriso zvakapfuura kuSocialBee, kusvika pakuisa pamwe chirongwa chako, unogona kuvimba nesu!
Dzidza Zvakawanda NezveSocialBee Services
Kuzivisa: Ini ndiri mubatanidzwa we YemagariroBee uye ndiri kushandisa zvakabatana zvinongedzo muchinyorwa chino.
Tags: bitlyBL.INKContent Marketingcontent marketing servicescsv kune social mediaFacebookFacebook bokaFacebook boka rekushambadziraFacebook pejiFacebook peji kutsikisaFacebook nhoroondogoogle bhizinesi rangugoogle bhizinesi rangu kutsikisaInstagraminstagram kutsikisaJotURLlinkedin kambani pejilinkedin kambani peji kutsikisaPixelMehomwequuuZvakareReplugRocketLinkRSSBhizinesi dukusangano rebhizimisi dukusocial media advertisingkugadzirwa kwesocial mediasocial media kukurakubatana kwenhaupasocial media kutsikisasocial media kurongasocial media serviceszvemagariro vezvenhau zanosocial media kudzidziswasocialbeeTwitterurl ipfupi